musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » UK yekufambisa basa rekucheka inopa kusimudzira kutsva mukufamba kwendege
UK yekufambisa basa rekucheka inopa kusimudzira kutsva mukufamba kwendege.
Ndege dzine huvepo hukuru mumusika wepamba weUK dzakagadzirirwa kubatsira zvakanyanya kubva kune idzi shanduko. APD yakashoropodzwa nekuita kuti ndege dzirege kushanda ngarava hombe mudzimba uye nhau idzi dzinogona kusunungura simbi.
Nekudiwa kwenzendo dzepamba kuchikwira, ndege dzinogona kubatsirwa zvakanyanya kubva kuAPD yekucheka.
Iyo yakachekwa muAPD ichasangana zvakanaka nendege dzepamba, kunyanya idzo dzine mahombe network.
Ndege dzeUK dzakasimudzira kushandira nzvimbo dzekumba nekuda kwekukwira kuri kudiwa, ukuwo kudiwa kwekufamba kwenyika dzese kwakaramba kwakadzvinyirirwa.
UK-based based airlines ichaona kudzikiswa kwebasa remutyairi wendege (APD) sekusimudzira kwakakosha kuindasitiri yendege. Nekuda kwenzendo dzekumba kuchikwira, zvakasanganiswa nehafu yeAPD muna 2023, ndege dzinogona kubatsirwa zvakanyanya.
Iyo yakachekwa muAPD ichasangana zvakanaka nendege dzepamba, kunyanya idzo dzine mahombe network. A £ 7 ($9.65) kuderedza mutero kunobvumira vatakuri kuderedza mitengo kuti vawedzere kukurudzira kudiwa. Zvakare, ndege dzeUK dzakasimudzira kushandira nzvimbo dzekumba nekuda kwekukwira kuri kudiwa, ukuwo kudiwa kwekufamba kwenyika dzese kwakaramba kwakadzvinyirirwa. Nenetiweki yakakura, vafambi vekuUK vanogona kuda kufamba nendege dzepamba mune ramangwana kana kuderedzwa kwemutero kuchiitika. Nekudaro, kuwedzera kwekuda kwaizoitika chete kana mari yakachengetedzwa ikaendeswa kumutengi nenzira yemitengo yakachipa yematikiti.
Logan Air, British Airways, uye Eastern Airways ine network dzakakura dzemumba uye vari pakati pevatambi vanozobatsirwa neUK nepakati nepakati APD yayo yepamba. Loganair ichave mubatsiri mukuru, nendege yakazadza chivharo chakasara flybe panguva yedenda. Indasitiri yagara ichikurudzira kuti APD ideredzwe, uye kudzikiswa kwacho kwaigona kuona dzimwe ndege dzichipa dzimwe nzira sezvo mitengo ichiwedzera kukwikwidzana nedzimwe nzira dzekufambisa.
Uyezve, flybe 2.0 inogona kubatsira. Kukosha kwepamusoro kweAPD muUK kwakataurwa sechikonzero chikuru chekupa chikonzero nei flybe akadonha. Kucheka kwakakosha kunopa mamwe maitiro akanaka ekushanda kune mutakuri kana atangazve.
Kune vazhinji vanofamba muUK, nzvimbo dzavo dzemari dzakachinja munguva pfupi yapfuura. Ongororo ichangoburwa yevatengi yakaratidza kuti 73% yevakapindura kuUK vaive 'zvakanyanyisa', 'chaizvo', kana 'zvishoma' vaine hanya nezve chinzvimbo chavo chemari nekuda kwedenda, vachiratidza mabhenefiti ekudzikiswa kweAPD.
Ndege dzinogona kunetsekana kukurudzira kudiwa panguva yeCOVID-19 yekupora. Nekunetseka kwemari kwakakwira, kuderedzwa kweAPD kunobvumira vatakuri kudzikisa mitengo uye zvirinani kusangana nezvinodiwa zvebhajeti-vanoziva vafambi. Pamusoro pezvo, kukwanisa kutenga kwakaverengerwa sechinhu chepamusoro nevapinduri veUK pavaifunga kwekuenda kuzororo, ne48% yevakapindura vakasarudza chinhu ichi sechinonyanya kukosha.
Kuderedza APD pandege dzemumba kunogona kuwedzera kudiwa kana mitengo mitsva yauya muna 2023. Mumakore maviri, kufamba kune dzimwe nyika kunogona kusvikika zvakanyanya kune vafambi veku UK. Kudzikiswa kwemutengo wendege dzepamba kunogona kubatsira musika wekufamba weUK kuchengetedza vamwe vevafambi vakasarudza kuenda kuzororo kuUK panguva yedenda.